Izeluleko Ezilusizo Zesifo Sikashukela > Isifo sikashukela
Izincomo ezibalulekile ezingasiza ukwenza ukuthi isifo sikashukela sibe ngcono
Kuyaziwa ukuthi isifo sikashukela yisifo esiyinkimbinkimbi se-endocrine, okungaholela kulokhu izifo eziningi ezihlangana nazo. Kungaba yi-cardiological, vascular, nephrological, ophthalmic nezinye izifo. Kepha imvamisa yalezi zifo kubantu abangenaso isifo sikashukela nayo iphezulu. Inzuzo yabanesifo sikashukela ukuthi bazama ukuvimba ukuthuthukiswa kwezinkinga ezingenhla, bazi ngengozi.
Ukuqapha ushukela wegazi ojwayelekile umgomo # 1 wazo zonke iziguli ezinesifo sikashukela.
Indlela yesiguli enesifo sikashukela inamaphuzu athile abalulekile:
1. Ukudla okunempilo.
Indlala nazo zonke izinhlobo zokudla ngeke kuholele emiphumeleni esebenzayo, kunalokho okuphambene. Kodwa ukudla okulinganiselayo okulinganiselwe kahle, kucatshangelwa wonke umsoco odingekayo, kuzosiza ukugcina izinga elifunekayo loshukela egazini futhi lithuthukise inhlala-kahle.
2. Ukulawula isisindo.
Imvamisa, amaphawundi ambalwa angeziwe aholela emazingeni aphezulu kashukela.
3. Ukuvivinya umzimba njalo.
Ukuze wandise ukuhamba kwegazi, uqinise inhliziyo, futhi ulawule amazinga kashukela, udinga ukuzivocavoca njalo. Ngeke nje zithinte ngokwanele amazinga e-cholesterol, kepha futhi futhi azonyusa amandla, futhi futhi nomthelela ekulaleni okuhle. Kuyaziwa ukuthi imisebenzi yezemidlalo iyikhambi elihle kakhulu lokuxineka nokudangala. Ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba, inani lama-insulin receptors liyanda - lokhu kusho ukuthi isidingo se-insulin siyancipha. Izinhlobo eziphumelela kakhulu zomsebenzi womzimba kwabanesifo sikashukela ukubhukuda, ukuhamba, ukugijima, ukudansa nokuhamba ngebhayisekili. Imvamisa yamakilasi ivela izikhathi ezi-3 kuye kweziyi-5 ngesonto. Kulesi simo kuphela umphumela oqondile ongeke ugcine ukulinda.
Le mithetho elula isebenza kubantu abajwayelekile abanempilo. Ukugujwa kwabo njalo kuzokwandisa ubusha nempilo iminyaka eminingi.
Iyingozi yiphi isifo sikashukela?
1. Okokuqala, i-hypoglycemia, okungukuthi, ushukela wegazi ophansi. Ukulinganisa ushukela ngaphambi kokudla nedosi elikhethwe kahle lomuthi kuzogwema le nkinga.
Okwesibili, i-hyperglycemia, okungukuthi, ushukela ophakeme. Ukudla ukudla okunamafutha, amaswidi, kanye nempahla ebhakiwe kungasicasula lesi simo.
Amavithamini kanye namaminerali sikashukela
Izithasiselo ezilusizo zizonikeza umzimba ngezinto ezidingekayo ukuze kulondolozwe ithoni namandla. Ama-Endocrinologists ngokuvamile anquma amavithamini alandelayo ezigulini ezinesifo sikashukela. Isibonelo:
• I-chromium - isakhi esisemqoka ekwelashweni kwesifo sikashukela, ngoba sikhulisa umsebenzi we-insulin ye-hormone,
I-Vitamin C ne-Zinc - isiza ekulweni nezifo nokwelapha amanxeba,
• I-Vitamin B3 - ikhuthaza ukumuncwa kwe-chromium,
• I-magnesium - inomphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa, futhi futhi yehlisa nomfutho wegazi,
• I-Vitamin B6 - ebaluleke kakhulu ekwelashweni kwesifo sikashukela, ngoba ibandakanyeka ekuphenduleni okuningi kwamaselula,
• Vitamin B1 - ubandakanyeka ekuqhekekeni kashukela.
Ukuze ube khona okugcwele ngokuphelele, isiguli sikashukela sidinga ukuqondisa impilo yaso, senze izindlela ezithile zokudla futhi sigcine amarekhodi wezinkomba ze-glucometer, futhi okubaluleke kakhulu, akunakuphikwa ukuthi kufanele sigxile kulesi sifo.
Izincomo ezivamile zabashukela
Kuyadingeka ukuqapha ngokuhlelekile ekudleni, into esemqoka ukuthatha ukudla ngendlela okufika ngesikhathi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi i-insulin ikhishwe ngesikhathi, kumthamo ofanele.
Ukuqapha okuhleliwe ushukela wegazi kuyinto ebalulekile kumuntu onesifo sikashukela.
Njengoba isifo sikashukela singaba nomthelela oyingozi empilweni yezinye izinhlelo zezitho, kuyadingeka ukuthi ngezikhathi ezithile siqaphe isimo sezitho zombono nezinso, kanye nezinye izitho ezibalulekile.
Abantu abanesifo sikashukela kufanele bavakashele udokotela ojwayelekile ukuze aqinisekise ukuthi lesi sifo sijwayelekile.
Ukuze uvikeleke ngangokunokwenzeka ezinkingeni ezingakhona, kungakuhle ukuthi uzivikele ekuchayweni kokuxineka nokwesaba.
Izeluleko Ezilusizo Zesifo Sikashukela
Kubalulekile ukuthi abanesifo sikashukela bagcine izinyawo zabo zifudumele, bezigcoba nge-lotion uma kunesidingo, futhi futhi bafake amasokisi afudumele.
I-insulin kanye nemichilo yokuhlola kufanele igcinwe ndawonye ivikelwe ekushiseni.
Esikhathini sikashukela sohlobo lokuqala, igazi likashukela kufanele lihlolwe kuze kube kane ngosuku, futhi kohlobo lwesibili - kuze kube kabili ngosuku.
Abantu abanesifo sikashukela kanye nabantu abaphilile bawusizo kakhulu ekuhambeni.
Khumbula lelo gazi likashukela lapho lihlolwe ngokushesha ngaphambi kokudla.
Kuzothatha unomphela ukulahla imikhuba emibi, ukuze ungakhuphi isimo sezempilo.
Odokotela batusa ngokuqinile ukuthola izindlela zokupheka ezinesifo sikashukela ukuze bandise ukudla kwakho ngokudla okunempilo nokunempilo.
Udinga ukwazi ukuthi ungalawula kanjani ushukela lapho ugula.
Uma ukhuluphele ngokweqile, kungakuhle ukukususa ngosizo lochwepheshe ofanelekayo.
Uzodinga ukugcina idayari yokondleka, ezokhombisa nemiphumela yako konke ukuhlaziya.
Uma kwenzeka kwehla kanzima ushukela, kuyaphuthuma ukufuna usizo olufanele.
Noma imuphi umsebenzi wokuzivocavoca kumele uvumelane kwangaphambili nodokotela wakho.
Uma unezinkinga zempilo, imibuzo noma ukungabaza, thinta uchwepheshe ngokushesha.
Ungahlali ezindaweni ezibandayo kakhulu noma ezishisa kakhulu.
Ososayensi batusa ukuthi abantu abanesifo sikashukela banciphise izipikili zabo, kodwa bazifayilishe.
Uma unesifo sikashukela, qiniseka ukwazisa odokotela bamazinyo kanye nama-cosmetologists ngalokhu.
Kuyingozi kakhulu kwabanesifo sikashukela ukuhamba bengafake zicathu.
Njalo ezinyangeni ezintathu kufanele uvakashele i-endocrinologist.
Ukuzilolonga nokusebenzisa okugeza okufudumele kunomthelela omuhle empilweni yabanesifo sikashukela.
Umfutho wegazi uzodingeka futhi ukulawula.
Akufanele ufihle izihlobo zabangane noma omunye umuntu ngokuba khona kwalesi sifo.
Ngokusobala, emhlabeni wanamuhla, akekho noyedwa umuntu ongavikelwa amaphesenti ayikhulu avikeleke engcupheni yesifo sikashukela. Njengoba lesi sifo sibucayi kakhulu, kuyadingeka ukusikhulumela nawo wonke umthwalo. Ukulawulwa kokudla okunempilo okuqinile, ukuhambela odokotela njalo, ukubuka inqubo yansuku zonke nokuyeka imikhuba emibi Kanye nokulandela izeluleko ezingenhla, zizosiza umuntu onesifo sikashukela ukuzivumelanisa nezimo ngokushesha nokwelashwa kwakhe.
Ithiphu 2. Yidla ukudla okuphansi kushukela.
Gwema ukudla ukudla okunenkomba ye-glycemic ephezulu. Inkomba ye-glycemic ikhombisa ukuthi lingakanani izinga le-glucose esegazini likhuphuka ngemuva kokudla umkhiqizo owodwa noma komunye.
Izintandokazi kufanele zinikezwe imikhiqizo enenkomba ephansi ye-glycemic (kusuka ku-10 kuye ku-40), okubangela ukwanda kancane kancane koshukela wegazi nokuncipha kwawo kancane kancane, okukuvumela ukuthi ulawule izinga le-glycemia.
Le mikhiqizo ifaka phakathi: ubhontshisi, ama-beet (eluhlaza), izaqathe (eluhlaza), ihalananda, i-tangerine, ama-raspberries, uphizi, i-asparagus, ukholifulawa, iminqumo, i-sauerkraut, iplamu, owolintshi, utamatisi, ushizi we-cottage nokunye.
Ngakolunye uhlangothi, ukudla okunenkomba ye-glycemic ephezulu ngeke kudliwe, ngoba kuholela ekwandeni okusheshayo kweglucose yegazi. Lokhu kufaka: imikhiqizo kafulawa, izithelo ezomisiwe, ushukela, uju, ilayisi elijwayelekile, i-oatmeal, i-granola enoshukela noju, i-ketchup, imayonesi kanye nokunye.
Uma ukhuluphele noma ukhuluphele, kufanele uzisebenzele ukubuyisela isithombe sakho kujwayelekile. Sike sahlola ukuthi ukukhuphuka kwesisindo kuholela kanjani ekuthuthukisweni kwesifo sikashukela. Ukukhuluphala kudala yonke imibandela yokuthuthukiswa kokumelana kwamangqamuzana ethu ku-insulin. Ukwehla kwesisindo kusiza ukuguquguqula amazinga kashukela egazini.
Imiphumela emihle yokuqala ivela lapho isisindo sincishiswa ngo-5% kusuka kwangempela. Ezigulini, ukwehla kwesisindo esingu-2 kg ngenyanga kuzoba okuphezulu, lapho ukwehla kancane kancane kweglucose yegazi kuzokwenzeka. Futhi-ke, inqubo yokunciphisa isisindo kufanele yenzeke ngaphansi kokuqashwa kukadokotela nangokuqashwa njalo kwamazinga kashukela wegazi.
Ngokuphambene nalokho, ukudla okunama-acid angenamafutha anomphumela omuhle ekusebenzeni kwe-insulin, futhi kufanele kukhethwe (ukudla kwasolwandle nemikhiqizo yesoya).
Ithiphu 5. Qaphela ukuthi uphuza ini.
Hhayi ukudla kuphela, kepha neziphuzo zingakhuphula ushukela wegazi. Imvamisa, iziphuzo ezinokuqukethwe okunoshukela ophezulu ekwakhiweni kuholela kulokhu.
Amanzi amaminerali noma itiye elingatholakalanga kufanelekile. Itiye, ikakhulukazi itiye eliluhlaza, linomphumela omuhle emzimbeni. Ngakho-ke, kufakazelwa ngokwesayensi ukuthi itiye eliluhlaza lihlisa ushukela wegazi.
Itiye eliluhlaza liqukethe inani elikhulu lamavithamini ajwayelekile, ama-carbohydrate nezakhi zomzimba (tannins), phakathi kwawo kukhona i-Vitamin B1, ethuthukisa umsoco we-metabolism ushukela emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, itiye eliluhlaza linomphumela onenzuzo kwezinye izitho nezinhlelo zomzimba wethu (zenhliziyo, wokuchama, wezinzwa).
Ngesikhathi sokuzivocavoca ngokomzimba, umsebenzi wezicubu zethu uyathuthuka futhi adinga amandla amaningi kunokuphumula. Ngezidingo zamandla aphezulu, inani elikhulu le-glucose liyashiswa futhi nezinga lakhona lifane nsejwayelekile.
Ukuzivocavoca kuzosiza ekunciphiseni ukumelana kwamaseli ethu ku-insulin. Hlala njalo emoyeni omusha, uhambe amabanga amafushane, hlela ukuhamba, vakashela ejimini. Ungahlali ekhaya!
Ithiphu 7. Esikhundleni ushukela ojwayelekile, sebenzisa ama-sweeteners.
Ngoba ushukela ojwayelekile uvusa ushukela wegazi, sebenzisa ama-sweeteners. Ngokungafani noshukela ojwayelekile, ama-sweeteners awathinti amazinga kashukela egazi.
Uma ungafuni ukusebenzisa ama-sweeteners, ungasebenzisa uStevia esikhundleni.
UStevia isitshalo emndenini we-aster. Inama-steviosides nama-rebaudiosides, amnandi kunoshukela. Umuzwa wobumnandi uza ngokuhamba kwesikhathi futhi uqhubeka isikhathi eside kunoshukela ojwayelekile. Futhi kungashiya imvamisa ethile ebabayo. Kepha ngenxa yokuthi akubangeli ukwanda kweglucose yegazi, kunconyelwa iziguli ezinesifo sikashukela.
Esenzweni sayo, isinamoni yi-hypoglycemic esebenzayo. Inezinto ezisebenza ngokusebenza kwemvelo - i-cinnamyl acetate, i-proanthocyanidin, i-aldehyde e-brown kanye notshwala obunsundu (cinnamaldehyde). Banciphisa cholesterol yegazi kanye nokwehlisa ushukela wegazi.
Umthamo wansuku zonke yi-1 gramu. Ungayifaka itiye noma ekhofi, kuhle ukufaka isinamoni kusaladi yemifino. Ungayifaka futhi ezitsheni eziyinkimbinkimbi, njenge-porridge yobisi lwerayisi nokunye.
Ithiphu 9. Yidla izithelo eziningi.
Izithelo ziyahambelana impela noshukela. Ama-apula anomthelela omuhle kushukela wegazi. Ziqukethe inani elikhulu le-ballast ntho, i-pectin, etholakala ikakhulu ku-peel. Iyakwazi ukukhulisa kancane kancane ushukela wegazi, ohlinzeka ngokulawulwa okungcono kwe-glycemic. Ngaphezu kwama-apula, i-pectin nayo iqukethe izaqathi.
Izithelo ze-citrus ezinjenge-pomelo ne-grapefruit eziphansi ushukela wegazi. I-grapefruit pulp, kanye nokukhipha imbewu ye-grapefruit, ilusizo kubantu abanesifo sikashukela.
Imifino inomphumela omuhle emazingeni kashukela. Aqukethe amavithamini C. Kuyasiza ukulwa nezinkinga zesifo sikashukela. It, kanye ne-insulin, kuvimbela ukulimala kwemithambo. Lokhu-ke kusiza ekugwemeni isifo senhliziyo, isifo sezinso, izifo zamehlo, ukulimala kwemithambo yendawo engezansi, nomfutho wegazi ophakeme. Ikakhulu iningi lazo okhalweni lwe-rose, i-sea buckthorn, upelepele obomvu.
I-Tip 10. I-Zinc ne-chromium kufanele kube ngamanani anele.
Naka ukusetshenziswa kwe-zinc ne-chromium ngokudla - ngaphezu kwakho konke, i-chromium ithinta ukwehla kwamazinga kashukela egazini. Kuthuthukisa isenzo se-insulin egazini. Umzimba uwuthola ekudleni - isinkwa sikakolweni esiphelele, ama-lentilidi noma inkukhu.
Akumele sikhohlwe nge-zinc. Kuyathinta ukukhiqizwa kwe-insulin, isenzo sayo kanye nokungamelana nomzimba esenzweni sawo. Ama-oysters, amabele kakolweni, okusanhlamvu okuphathelene no-oatmeal kanye nojongilanga kucebile kakhulu ku-zinc.
Sibuyekeze izeluleko ezilula eziyishumi sikashukela ukukusiza uzizwe ukhululekile kakhudlwana.
Yini okungafanele kudliwe ngabantu bonke ngesifo sikashukela, wonke umuntu uyazi, nokuthi usiphatha kanjani lesi sifo, hhayi wonke umuntu owaziyo. Abelaphi bendabuko abaningi bakholelwa ukuthi kungcono ukusebenzisa umuthi wendabuko. Kunamakhambi amaningi asebenza kakhulu ekwelapheni lokhu kugula. Izindlela zomzimba, izinto zemvelo ezahlukahlukene nazo zingasiza kakhulu ekwelapheni isifo sikashukela ngenxa yokuthi zinomthelela ekubuyiselweni okuyingxenye kwamaseli e-pancreatic akhiqiza i-insulin.
Lapho welapha ngokudla nezitshalo zokwelapha, kuyadingeka ukuthi ubheke njalo ushukela egazini. Ngokuya ngohlobo lwalesi sifo, kufanele uzikhethele ezingabizi kakhulu kuzindlela ezingezansi.
1. Ubisi, i-nokunye okufana nokolweni nommbila kunciphisa ushukela wegazi. Kuyadingeka ukugaya okusanhlamvu bese uthele 1 tbsp kusihlwa. l ufulawa noma yisiphi salezi izilimo ngengilazi yamanzi noma i-kefir. Faka ubusuku nokuphuza ekuseni. Ukusetshenziswa njalo kwekhambi elinjalo kuvamisa ushukela ezitshalweni. Kumelwe kwenziwe ufulawa kuphela okusanhlamvu okuluhlaza, hhayi okuthosiwe.
2. I-legumes isiza ukwehlisa ushukela wegazi. Umuthi wendabuko uyazi amacala amaningi okusebenzisa kwawo le njongo. Isibonelo, omunye umuntu onesifo sikashukela wagwinya ubhontshisi omncane omile njalo ekuseni esiswini esingenalutho, owesibili walambisa ubhontshisi omhlophe ebusuku, wawafuna futhi wawadla ekuseni. Kuzona zozimbili lezi zimo, umphumela waba muhle. Elesithathu, ukuze kugcinwe ushukela ojwayelekile, bekudinga izinhlamvu eziyisithupha zikabhontshisi.
Umuthi wendabuko une-arsenal enkulu yezitshalo zokwelapha esehlisa ushukela wegazi. Lezi zitshalo zifaka: i-orange, i-periwinkle encane, i-blackberry, i-beetroot, i-alder, imbewu yesinaphi, ukhunta wase-India, i-birch ne-aspen tar, amaqabunga e-birch kanye nama-buds, i-watermelon, amadevu wegolide, amazambane, ubhontshisi, isinamoni, i-nettle, i-dandelion, iqabunga le-bay, i-quinoa, i-mzigo, i-Schisandra chinensis, imbewu yefilakisi, i-mummy, i-aspen, amaqanda izigwaca, i-parsley, i-Rhodiola rosea, i-clove (izinongo), ama-strawberry asendle, u-anyanisi, i-chicory, i-blueberries, i-sage, i-mulberry, njll. Isiguli ngasinye kufanele funa umuthi wakhe, kumele akhethe umthamo. Okubaluleke kakhulu lapha yisici sokusebenza kwengqondo.
Amantongomane anezindawo ezinhle zokunciphisa ushukela. Umuthi wendabuko uncoma uthele uviniga ngezinkomishi ezi-0,5 zamaphaza aluhlaza, ushiye isonto lonke udle umhluzi o-1 ekuseni nakusihlwa, kungakhathalekile ukuthi kudliwani. Kwezinye izimo, ushukela wehle ukusuka kumayunithi ayi-13 kuye kwangama-5.5, okungukuthi, esimeni esifanele. Uma usebenzisa i-peanut nati 10 esikhundleni se-1, lapho-ke ungalungisa ukucindezela ngokweqile nge-hypertension. Amantongomane ekwelashweni kufanele aphathwe eluhlaza, ngefilimu engabonakali, ngaphandle kokuthi igcwele ku-cellophane.
I-artichoke yaseJerusalema inezindawo ezinhle zokwehlisa ushukela, isenzo sayo sithambile futhi siyaphikelela. Basebenzisa i-artichoke yaseJerusalema, engeza amaqabunga amasha nama-tubers kumasaladi. Ekwindla nasentwasahlobo zidliwa zintsha, kanti ebusika zoma.
Ama-baths ne-Jerusalema artichoke: 1.5 kg yengxube echotshoziwe yeziqongo, amaqabunga, izimbali, nezilimo eziyizigaxa ezintsha noma ezomile, uthele ibhakede lamanzi abilayo ebhakedeni, ulethe ku-thumba bese ubilise imizuzu eyi-10-15. Khipha emlilweni, gcoba imizuzu engama-20, uthele kubhavu ngamanzi angashisi kakhulu nomusi imizuzu engu-15. Yenza inqubo zonke ezinye izinsuku. Sekukonke, udinga ukuthatha amabhathi anjalo angama-15- 40, ngokuya ngomphumela.Ukwelashwa okunjalo kusiza nge-hypertension, isifo sikashukela kanye nokubekwa kukasawoti.
Imiphumela emihle yokwehlisa ushukela kushukela inikezwa ukusetshenziswa ekwelapheni ifilakisi.
2 tbsp. l imbewu yesitshalo kufanele ibe inhlabathi ibe ufulawa, uthele amalitha ayi-0,5 amanzi abilayo bese ubilisa imizuzu emi-5 endishini. Ipholile ngaphandle kokususa isembozo. Phuza umhluzi ufudumele, ngasikhathi, imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 ngaphambi kokudla. Ungalahla i-thickener, kepha uma une ukuqunjelwa, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa i-decoction nge-ukuqina. Ngemuva kwenyanga, uzozizwa ulula esiswini, izinhlungu kumanyikwe zizodlula, futhi ukubukeka kuzothuthuka. Umhluzi kufanele udakwe usha.
Ungathatha ama-infusions kanye nama-decoctions amakhambi.
I-parsley edliwayo (ijusi le-parsley inamandla okuqinisa imithambo yegazi, ikakhulukazi ama-capillaries, okubalulekile kwisifo sikashukela, imifino kanye ne-parsley izimpande nakho kunomthelela wokwehlisa ushukela).
Faka amasaladi ekudleni kwakho: i-100 g ye-parsley izimpande, ama-apula we-2, ushukela wezithelo (i-xylitol noma i-sorbitol), ujusi we-1 kalamula, engeza i-parsley ukunambitha.
Qoqa amaqabunga angama-60 g amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka ngoMeyi-Juni, engeza ama-500 ml wamanzi abilayo, shiya imizuzu engama-20, upholile, unzima. Thatha izinkomishi ze-0.5 izikhathi ezi-3-4 ngosuku. Kuyasiza ukudla i-blueberries, ngoba izakhi zomkhondo eziqukethwe amaqabunga zisiza ushukela wegazi ophansi.
Amacembe ama-dandelion amasha okufanele awasebenzise ngendlela yesaladi (amacembe ama-dandelion amasha aqukethe i-insulin). Cwilisa amaqabunga imizuzu engama-30 emanzini, yomile futhi nquma kahle, engeza imifino (iparsley, i-dill, isithombo noma isithombo setiyi esisha, njll), isikhuphisi seqanda, inkathi nge imayonesi, ukhilimu omuncu noma uwoyela wemifino.
Thatha okwenziwe ngomumo (okuthengiswe ekhemisi) prickly Eleutherococcus khipha ama-20 wehla amahlandla amabili kuya kathathu nsuku zonke ngaphambi kokudla.
Thatha i-tincture yeSchisandra chinensis ukuthatha amaconsi angama-20-25 izikhathi ezingama-1-3 ngosuku ngaphambi kokudla.
Ukufakwa kweRosehip: 1 inkomishi ebilayo yamanzi nge-10 ama-pcs. okhalweni oluhlakazekile oluhlangene. Thela izithelo ngamanzi abilayo bese ubamba ukushisa okuphansi imizuzu engama-3-5, shiya amahora angama-5-6, ubunzima. Phuza izinkomishi ezi-0,5 izikhathi ezi-3 ngosuku.
Thatha i-1 tsp nsuku zonke. I-Jerusalema artichoke powder (uphaya wobumba). Geza, sula izimbungulu ze-articoke zaseJerusalema, zomile, uzinqume kahle, zomile ugaye zibe yimpuphu.
Ukusetshenziswa kwe-artichoke yaseJerusalema kupholisa cishe zonke izifo ze-vascular and metabolic.
I-50 g yamaqabunga we-nettle (mhlawumbe okusha) uthele ama-500 ml wamanzi abilayo endishini, gcizelela. Ngemuva kwamahora ama-2, ubunzima. Phuza i-1 tsp. Izikhathi ezi-3 ngosuku ngaphambi kokudla. Kunconywa ukusebenzisa ekudleni kanye nettle. Amaqabunga kanye namahlumela wezinsane ezincane zivunwa kakhulu ebusika ngokuwomisa noma ukuwabilisa. Futhi wonke ama-infusions ebusika asebenzisa ama-infusions, isobho, itiye enamaqabunga e-nettle. Kwenziwa okufanayo ngamaphupho. Amaqabunga e-nettle namaphupho - i-pantry yezinto ezilandelwayo.
Insimu yamahhashi ngendlela yesaladi ne-infusions, uthele ingilazi yamanzi abilayo 30 g wenkundla yamahhashi, ubilise imizuzu engama-5-7, ugcizelele amahora angama-2-3, ubunzima. Thatha u-2-3 tbsp. l Izikhathi ezingama-3-4 ngosuku ngaphambi kokudla.
Imali yokwelashwa kwesifo sikashukela: ama-20 g amahlumela we-blueberry, amaqabunga ebhontshisi, i-15 g yamahhashi, okhalweni okusukuma, 10 g wezimpande ze-Manchurian aralia, i-wort yaseSt. Hlanganisa yonke into, uthele endishini engafakwanga i-10 g yeqoqo, uthele izinkomishi ezi-2 zamanzi ashisayo, ukushisa kubhavu wamanzi imizuzu engu-15, ukupholisa ukushisa kwegumbi, ubunzima. Thatha ukumnika izinkomishi 0.3 izikhathi 2-3 ngosuku imizuzu 30 ngaphambi kokudla izinsuku ezingama-20-30. Ngemuva kwezinsuku eziyi-10-15, phinda isifundo. Phakathi nonyaka, ungaphinda izifundo ezinjalo njalo ezinyangeni ezi-3.
Thela 1 tbsp. l amaqabunga e-walnut oqoshiwe ngamanzi abilayo, ubilise ukushisa okuphansi imizuzu engama-20-30, gcizelela, ubunzima, uthathe usuku lonke.
Ijusi entsha yezaqathi, iklabishi noma amazambane aluhlaza ukuze uphuze izinkomishi ezingama-0,25 zejusi ngayinye izikhathi ezine ngosuku.
Ukwelapha isifo sikashukela, kusetshenziswa izitshalo zokwelapha ezifika ku-150. Ngakho-ke, ama-infusions kanye nama-decoctions atholakala ezimpandeni nasezihlolweni zerayisi, kakolweni, nebhali kunomphumela ophonsa ushukela. Faka isicelo se-infusions kusuka ngeziqu kanye namaqabunga esihlahla sikabhele, imbewu ye-buttercup, imbewu ye-caraway, ugarliki, amakhasi we-lemon, ama-hops, itiye kusuka ku-infusions of ikhasi le-sage nobhontshisi, ama-decoctions we-blueberries, tinctures wesilingo.
Indlela yokuselapha i-mellitus yesifo sikashukela ngokudla kwe-oat ijwayelekile: uthele i-100 g yezinhlamvu ezingilazini ezi-3 zamanzi, ubilise ihora eli-1, shiya ubusuku obubodwa, unya futhi uthathe isigamu sengilazi izikhathi ezingama-3-4 ngosuku ngaphambi kokudla.
Kufakazelwa ukuthi izitshalo ziqukethe izinto ezifanayo esakhiweni se-guanidine derivatives, zinezindawo eziphonsa ushukela.
Izimali ezikhokhwayo ezilandelayo zinomphumela omuhle kushukela:
1. Amaqabunga e-Blueberry - 20 g, izimbali zeHypericum - 20 g, pods yebhontshisi - 20 g.
Hlanganisa konke. Thela ingxube nge-1 litre lamanzi abilayo, ubilise okuqukethwe imizuzu engu-1-2 ngesivalo esivaliwe, shiya amahora angama-8 kuya kwendawo emnyama. Thatha izinkomishi ze-0.3 izikhathi ezintathu ngosuku ngaphambi kokudla.
2. Umuthi weGalega officinalis - 20 g, pods webhontshisi - 20 g, iqabunga le-blueberry - 20 g, amajikijolo e-rosehip - 20 g.
Ukupheka njengasekuqaleni iresiphi. Thatha izinkomishi ze-0.5 izikhathi ezintathu ngosuku ngaphambi kokudla.
3. Izimbali zeSt wort - 25 g, amaqabunga e-dandelion - 10 g, utshani be-galega officinalis - 20 g, amaqabunga e-nettle - 15 g.
Ukupheka njengasekuqaleni iresiphi. Thatha izinkomishi ze-0.3-0.5 izikhathi ezine ngosuku ngaphambi kokudla.
4. Iqabunga le-Blueberry - 25 g, pods yobhontshisi - 20 g, iqabunga le-dandelion - 15 g.
Ukupheka njengasekuphekeni kwangaphambilini. Thatha izinkomishi ze-0.3 izikhathi ezingama-3-4 ngosuku ngaphambi kokudla.
5. Iqabunga le-Blueberry - 25 g, i-wort yase-St John - 20 g, ama-podan emabhontjisi - 20 g, imbiza galega officinalis - 25 g.
Ukulungiselela nokusetshenziswa, njengakwindlela zokupheka ezedlule.
6. Izimbali ze-wort zase-St John - 25 g, izimbali ze-blackberry ezimnyama - 20 g, iqabunga le-dioecious nettle - 15 g, iqabunga le-walnut - 20 g, iqabunga le-sitrasi - 15 g.
7. Ama-aluhlaza okwesibhakabhaka ahlanzekile - 30 g, i-herb galega officinalis - 20 g, amajikijolo ama-lingonberry amasha - 30 g, Izimbali ze-wort zaseSt. - 20 g, iqabunga le-sitrobheli - 15 g, iqabunga le-bearberry - 10 g
8. Inkambu yamahhashi - 20 g, iqabunga le-blackberry elimnyama - 10 g, izimpande ze-elecampane - 5 g, iSt John wort - 10 g, iqabunga lembabazane - 5 g.
9. Impande ye-zamaniha - 5 g, impande ye-dandelion yokwelapha - 5 g, impande ye-chicory - 10 g, imbewu yefilakisi - 5 g, iSt John's wort - 10 g, i-linden iqhakaze - 10 g, impande ye-chicory - 5 g.
Hlanganisa konke. Bilisa ukushisa okuphansi imizuzu engama-30 kwilitha elilodwa lamanzi. Faka endaweni efudumele amahora angama-3-4. Strain. Thatha 3 tbsp. l Izikhathi ezingama-3-4 ngosuku imizuzu engama-20 ngaphambi kokudla.
Emakhemisi, ungathenga iqoqo elilandelayo (arfazetin) ekwelapheni isifo sikashukela.
Ama-Blueberry amahlumela - 20 g, amaqabunga obhontshisi - 20 g, izimpande ze-Manchurian aralia - 10 g, insiza yamahhashi - 15 g, okhalweni lwe-rose - 15 g, i-wort yase-St. - 10 g, izimbali ze-chamomile - 10 g. Thela ezitsheni ezingenamuntu, uthele Izinkomishi ezi-2 zamanzi abilayo (i-400 ml), ukushisa kubhavu wamanzi imizuzu eyi-15, kuphole ekushiseni kwegumbi okungenani imizuzu engama-45, ubunzima, ucishe izinto ezingavuthiwe ezisele. Umthamo we-infusion wagcwala amanzi abilisiwe ku-400 ml. Thatha imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla (okungcono ngendlela yokushisa) izinkomishi ezingama-0,3-0,5 izikhathi ezingama-2-3 ngosuku izinsuku ezingama-20-30. Ngemuva kwamaviki ama-2, phinda isifundo. Yenza izifundo ezi-3-4 ngonyaka.
Le mithi elandelayo ithandwa kakhulu yisifo sikashukela:
1. LALESI SILULEKILE: I-20 g yezinso ithululela ama-200 ppm wamanzi abilayo bese ugcizelela ihora 1. Thatha i-1 tbsp. l kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
2. Amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka owomile ukugcizelela futhi uphuze like itiye izikhathi 3-4 ngosuku izinkomishi 0.5.
3. Cola umsila wethanga, uthathe izingxenyana ezincane eziyi-15 cm zesibalo esidala esenziwe umunwe, amagobolondo aqhamuka emabhonteni angama-20 no-30 g corn stigmas. Thela ilitha elilodwa lamanzi abilayo kuyo yonke indawo bese ugcizelela amahora angama-8 esitsheni esivaliwe futhi endaweni efudumele. Inhlungu. Thatha i-100 ml izikhathi ezingama-3-4 ngosuku.
4. Ijusi yamazambane emisha iwusizo kakhulu. Thatha izinkomishi eziyi-0.5 isigamu sehora ngaphambi kokudla.
5. Uma uthatha imbewu yesinaphi ngaphakathi kwe-1 tsp. kathathu ngosuku, khona-ke izinga leshukela legazi liyancishiswa.
6. Ukufakwa kwezimbali ze-clover meadow ebomvu: 1 tbsp. l phisa izinto zokusetshenziswa ezingavuthiwe ezingama-200 ml wamanzi abilayo, gcizelela ihora 1. Phuza i-1 tbsp. l kathathu ngosuku.
7. Amaqabunga e-Blueberry - ingxenye eyi-1
Amaphaphu emabhontjisi owomile - 1 ingxenye
Imbewu yefilakisi - ingxenye eyi-1
I-Oats Straw - ingxenye eyi-1
3 tbsp. l ubilise le ngxube ezingilazini ezi-3 zamanzi imizuzu eyi-10. Faka kuhovini amahora amabili. Thatha izinkomishi ze-0.3 izikhathi ezi-6,5 ngosuku.
Ngabe unesifo sikashukela? Ungalahli ithemba! Ngalesi sifo kungenzeka ukuthi uphile ngokujwayelekile. Vele usebenzise lezi zeluleko ezilula nesifo sikashukela ngeke zikudalele usizi.
1. Yazi ushukela wakho. Yazi nezimbangela kashukela omkhulu wegazi. Lokhu kungumthetho oyisisekelo okufanele basebenzise bonke aboshukela. Kubalulekile ukulawula ushukela wegazi lakho. Ochwepheshe batusa ukuthenga i-glucometer esezingeni eliphakeme.
Uzokwazi ukuzimela ngokuzimele ukuthi unoshukela ongakanani, bese-ke, ngokuya ngemininingwane etholakele, jove umthamo ofanele we-insulin. Udinga ukusebenzisa imitha kaningi ukuvikela amazinga aphakeme kakhulu we-glucose.
2. Pheka ukudla kwakho. Nqaba ekudleni okulula, amasaladi, namakhekhe. Iqiniso ngukuthi ushukela ocashile uvame ukufihlwa emikhiqizweni yesitolo. Ucabanga ukuthi uthenga ijusi yemvelo, kepha empeleni ligcwele ushukela nodayi.
Uma upheka ukudla kwakho, ungalawula okuqukethwe ushukela. Isifo sikashukela kufanele silandele ekudleni okubandakanya ukudla okwengeziwe kwemvelo. Futhi kungcono ukukhohlwa mayelana nezimpahla zezitolo.
3. Yidla konke, kepha ngokulinganisela. Abanye abantu abanesifo sikashukela badla ngokuqinile. Bayenqaba cishe yonke imikhiqizo yokudla. Badla iphalishi, baphuza amanzi nezinto abazithambisa ngesaladi. Bese kuba nezilonda nokukhathala.
Uma ulambile, ungazilambisi. Abanesifo sikashukela bavunyelwe cishe yonke imikhiqizo. Udinga nje ukuzidla kancane. Yidla inyama ebilisiwe, inhlanzi eshiziweyo, imifino eluhlaza nengasetshenziswanga.
4. Shayela ngenkuthalo. Ukuzivocavoca kungasiza ukugcina amazinga akho kashukela evamile. Hlanganisa kahle i-aerobics nokuzivocavoca kwe-Cardio. Bawasekela ngokuphelele ithoni yomzimba futhi bandisa ukungatheleleki komzimba.
Ochwepheshe bathi ukusebenza ngokomzimba kusiza ukucubungula ushukela ngokushesha. Futhi basheshisa imetabolism. Kuliqiniso, abanesifo sikashukela kufanele bagweme imidlalo eyeqisayo engaba usizi.
5. Ungathuli ngenkinga yakho. Abantu abanesifo sikashukela bavame ukuba namahloni ngokuxilongwa kwabo. Bancamela ukungakhulumi ngaye. Ngisho nathi. Isifo sikashukela kubukeka njengomusho oholela empilweni engaphansi nokufa.
Ungesabi ukubhekana nokwesaba kwakho. Funda konke ngalesi sifo, unikine izimvuthu zabantu abakhiphe lesi sifo. Ngakho-ke uthola amandla bese uqala ukulwa nesifo sikashukela ngamandla avuselelwe.
Ukuze leso sikashukela singaphazamisi impilo yakho, lalela lezi zeluleko ezilula. Bazokusiza ukudambisa imiphumela yalesi sifo.
Thayipha indlela 2 yesifo sikashukela: izeluleko zabanesifo sikashukela
Ngokukhuphuka, ngemuva kweminyaka engama-40, kuvela isifo sikashukela sohlobo 2. Ngokuyisisekelo, lesi sifo senzeka lapho umuntu edla ngokungafanele (okunamafutha nokudla okumnandi), esebenzisa kabi utshwala, nogwayi futhi ephila impilo yokungasebenzi.
Futhi, lesi sifo sivame ukwenzeka kubantu abakhuluphele. Enye into ebalulekile ukucabanga kwifa.
Uhlobo lwesibili sikashukela ukugula okubangelwa yi-metabolic lapho kuphawulwa khona i-hyperglycemia. Kwenzeka ngenxa yokuntuleka kokuzwela kwamaseli wezicubu ukungena ku-insulin.
Naphezu kweqiniso lokuthi lolu hlobo lwalesi sifo aludingi ukuphathwa kwe-insulin njalo, ukuqhubeka kwalo kuholela ezinkingeni eziningi ezinjenge-encephalopathy, i-retinopathy, i-neuropathy, i-nephropathy, njalonjalo. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela kudingeka bashintshe ngokuphelele indlela yabo yokuphila. Ngakho-ke zidinga ukucabanga kabusha ngokudla kwazo, zingene kwezemidlalo futhi zilahle imilutha.
Isifo sikashukela asisona isifo uma unamathela endleleni yokuphila enempilo, eyinhloko okuwukudla okulinganiselayo. Umgomo oyinhloko wukudla ukudla ngezingxenyana ezincane kuze kube izikhathi eziyisithupha ngosuku, ukuze ikhefu phakathi kokudla okulula kungabi ngaphezu kwamahora ama-3.
Ukudla kufanele kube phezulu kilojoule, ngoba ukungondleki kahle ngohlobo 2 sikashukela kuyalimaza njengokudla ngokweqile. Futhi iziguli ezikhuluphele kufanele zibonane nodokotela wezempilo ozolungisa indlela odla ngayo.
Ngemuva kwakho konke, ukudla okune-carb ngokulinganayo okunomthelela ekujuleni kokujwayeza ushukela kanye nesinxephezelo esihle sikashukela, ngoba ukugcwala ushukela egazini ngisho nangemva kokudla ngeke kube ngaphezulu kuka-6.1 mmol / l.
Indlela yokuphila yesifo sikashukela kufanele ibe nokudla okufanele. Imikhiqizo evunyelwe ifaka:
Inhlanzi enamafutha aphansi nenyama ngendlela ebhaka noma ebilisiwe.
Isinkwa esimnyama esine-bran noma kusuka kufulawa emathafula (kufika ku-200 g ngosuku).
Ama-imifino nemifino - i-zucchini, iklabishi, ukhukhamba, isithombo kungadliwa ngobuningi obujwayelekile, futhi ukusetshenziswa kwama-beet, amazambane kanye izaqathi kufanele kukhawulelwe.
Amaqanda - angadliwa kabili ngosuku.
Ama-cereals - ama-buckwheat, i-oatmeal, ilayisi, ibhali kanye no-millet avunyelwe ngezinsuku lapho engadli khona isinkwa. USemolina ungcono ukukhipha ekudleni.
I-Legumes ne-pasta kusuka ezinhlotsheni ezinzima - yidla ngamanani amancane esikhundleni sesinkwa.
Isobho elinamafutha aphansi kunhlanzi, inyama noma umhluzi wemifino.
Amajikijolo (ama-blueberries, ama-cranberries) nezithelo (izithelo zezithelo zomdumo, kiwi, ama-apula).
Ngokuphathelene nemikhiqizo yobisi, ubisi lonke kufanele lulahlwe. Kuyafaneleka ukunikela ngokuthanda i-kefir, iyogathi (1-2%), ongayiphuza kuze kufike ku-500 ml ngosuku. Ukusetshenziswa koshizi onamafutha asezingeni eliphansi (kufika ku-200 g ngosuku) kuyanconywa futhi.
Ngokuphathelene neziphuzo, okubaluleke kakhulu yiziphuzo ezintsha ezihlanjululwe ngamanzi. Kwesinye isikhathi ungaphuza ikhofi ebuthakathaka ngobisi, itiye elimnyama noma eliluhlaza.
Isifo sikashukela asisona isifo, kodwa indlela yokuphila, ngakho-ke isiguli kuyodingeka senqabe noma sinqume ukusetshenziswa kokudla okuthile. Into yokuqala okufanele uyikhohlwe ngoshukela nokudla okumnandi (ushokoledi, muffin, amakhukhi, ujamu). Ngamanani amancane, ungadla uju, i-fructose nezinye izinongo.
Abondli bezempilo abafundiswanga ukuthi bahlanganyele ezithelo ezimnandi (ubhanana, ama-Persimmons, amakhabe) nezithelo ezomisiwe (izinsuku, omisiwe). Kuvinjelwe futhi ubhiya, i-kvass ne-lemade.
Labo abangakwazi ukuhlala ngaphandle kwamaswidi kufanele banikeze izintandokazi kuma-dessert ku-fructose, athengiswa ezitolo zokudla eminyangweni ekhethekile yabanesifo sikashukela. Kodwa-ke, kufanelekile ukukhumbula ukuthi akukho ngaphezu kwe-30 g yanoma iyiphi i-sweetener engadliwa ngosuku.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ulahle okuthosiwe, ukudla okunamafutha, inyama ebhemayo, imikhiqizo eseqediwe, ama-pastes nososo. Akukalulekanga ukuthi udle isinkwa esimhlophe namakhekhe aqukethe umanyolo.
Eminye imikhiqizo esesigabeni sokuvinjelwa:
inhlanzi enosawoti neyabhemayo,
I-pasta kusuka kufulawa yebanga eliphakeme kakhulu noma 1,
ibhotela namanye amafutha okupheka,
imayonesi kanye nososo olufanayo.
Bliss Michael Ukutholwa Kwe-Insulin. 1982, 304 k. (UMichael Bliss Ukutholwa kwe-insulin, le ncwadi ayihunyushelwe kwisiRussia).
Thayipha isifo sikashukela 2. Ukusuka kumqondo wokuzijwayeza. - M: I-ejensi yezeMedical Medical, 2016. - 576 c.